Ezigbo Ndị Ahịa Mkparita | Martech Zone
Ezigbo Mmegbu Ahịa
Friday, December 14, 2007 Monday, September 24, 2012 Douglas Karr
Ekwenyesiri m ike na onye ọ bụla nwere ụdị ndị ahịa a. Enweela ngọzi na afọ iri gara aga na enwere m ndị ahịa nwere ezigbo obi ụtọ iso m rụọ ọrụ. Ahụla m otú ụfọdụ ụlọ ọrụ si emeso ndị ahịa ha ihe, m kpọkwara ya asị. Ana m achọ mgbe niile na ọkwa dị elu nke ọrụ. Emeela m nkwa karịa ma nyefee ya. Ma, geesh… na onye ahịa… ma ọ bụrụ na m nwere ike na-ede ha a leta…
Ezigbo Ndị Mmejọ,
Laa azụ mgbe ị họpụtara anyị dị ka onye na-ere gị, ị jụrụ ọtụtụ ajụjụ ma dọkpụrụ anyị na-enweghị obi ebere site na kilomita nke teepu uhie tupu ị kpebiri na anyị bụ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka gị. Ugbu a ị họrọla anyị, ọ bụghị anyị kpatara ya na ị naghị enwe obi ụtọ ugbu a na njirimara na arụmọrụ anyị gosiri gị na ị hụrụ n'anya. Anyị aghaghi ụgha. Anyị akọghị akụkọ ụgha. Ọ bụ gị gbanwere obi gị.
Anyị ga-anọgide na-enwe obi ụtọ na anyị zutere 100% nke gị chọrọ na karịa niile nke gị deadlines. Nke ahụ bụ nkwa anyị kwere gị ma anyị debe ya.
N'agbanyeghị ihe ị nwere ike ikwere, isi anyị abụghị ibibi azụmahịa gị. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịnọgide na-azụlite ihe ngwọta kasịnụ na mbara ala. Anyị maara na anyị karịrị ndị ọzọ na-ere ahịa na atụmatụ, nkwekọrịta, ojiji, ma anyị nwere ọtụtụ nsogbu karịa ụlọ ọrụ ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ndị asọmpi anyị anaghị ewetara gị ozi email ma ọ bụ nọmba ekwentị ha, anyị webatara nke ọ bụla n'ime ndị ọrụ anyị maka gị n'onwe gị, nye gị ozi kọntaktị anyị niile, ma nwee nkwado onwe onye 24/7. Ebumnuche nke a abụghị ịnye gị onye ọrụ ị ga-elelị anyị, ọ dị ebe ahụ n'ihi na anyị na-eche banyere gị, ụlọ ọrụ gị, na ndị ahịa gị.
Ọ bụla ahịa bụ anyị # 1 mkpa. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na gị na anyị na-emefukwu ego, ị ga-enwe obi ụtọ mgbe ndị ọzọ na anyị na-emefu nnukwu ego, karịa.
Anyị na-enyocha oge niile na ụlọ ọrụ, teknụzụ, na ndị na-azụ ahịa ka ị ghara. Nke a na-enye anyị ọhụụ ọhụụ na nkwado azụmaahịa nke atụmatụ na ndozi nke gafere afọ na-esote. N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, anyị anaghị anọdụ n'ihe ndina na-egwu World of Warcraft ma na-eche mkpesa na-esote. Anyị na-arụ ọrụ, anyị na-etinye ego, ma anyị na-eweta ndozi kwa ụbọchị. Anyị nwere usoro ọrụ anyị. Ihe ị choro ka eweputa ihe ohuru ohuru nwere ihe ndi ozo banyere atumatu ndi anyi na aru oru na ebumnuche anyi nwere. Mara na anyị ga eme ike anyị niile ịge n’ihu ndị ọzọ - mana ọ ga-ewe oge ịhazigharị oge, ebum n’uche na atụmanya nke onye ọ bụla n’ime nzukọ anyị.
Iti mkpu maka atụmatụ ka emechaa ụnyaahụ agaghị eme ka njirimara ahụ dị mma ma ọ bụ bụrụ ntụkwasị obi. Anyị nwere usoro, nnwale, na mmesi obi ike na ebe maka gị nchedo, ọ bụghị nke anyị.
Ọ bụrụ na, oge ọ bụla anyị kpọrọ gị, naanị ebumnuche gị bụ ịkparị anyị na iweda anyị ala - anyị agaghị apụ n'ụzọ anyị wee kpọọ gị ma nyere gị aka imeziwanye nsonaazụ azụmaahịa gị. Anyị enweghị ike ịmụta ihe n'aka gị ma ọ bụrụ na ị nyeghị anyị ohere. Anyị ga-akwụsị ịpụ n'ụzọ anyị iji nyere gị aka n'ihi na anyị na-echebara ndị ọrụ anyị echiche nke ukwuu nke na anyị achọghị ịhụ ka a na-emegbu ha. Anyị ga-kama nọrọ oge anyị na ndị ahịa ndị na-amata nka na ha na-nyekwara na chọrọ na-arụ ọrụ ọnụ na anyị maka otu ihe mgbaru ọsọ.
Azụmaahịa anyị anaghị eto afọ iri karịa afọ n'ihi na anyị adịghị akọ ma anyị aghọtaghị ihe anyị na-eme. Anyị na-agbanwe ụlọ ọrụ wee mata ya maka ya. Mgbanwe chọrọ agụụ, akụrụngwa na oge. Nwee ndidi n’ebe anyị nọ, ị gaghị enwe mwute. Ndị ahịa anyị nwere ike soro anyị rụọ ọrụ ma ọ bụ ha nwere ike ibuso anyị agha, kedụ onye ị chere ga-erite uru karịa?
Emeela ka ndị ọrụ gị nwee obi ụtọ iji melite iguzosi ike n'ihe ha na arụpụta ihe. Think chere na ọ dị iche na onye na-ere ngwa gị?
Ndi Erere You Ma Ama Zuru
Tags: APIngwantinye ntinye ihe omumeb2cgamificationjsonaha njikwafọdurunchagbawara n'etiti uletestingechiche onye ọrụwordpress iphonewordpress iphone ngwaXML
Ike Staynọgide: Ogologo oge ole ka ị ga-anọ?
Dec 15, 2007 na 7:28 PM
Ọ masịrị m. M ga-edegharị paragraf abụọ mbụ dị ka nke a:
“Laa azụ mgbe ị họpụtara anyị dị ka onye na-ere gị, ị jụrụ ọtụtụ ajụjụ ma dọrọ anyị na-enweghị obi ebere site na kilomita nke teepu uhie, mee ka anyị depụta nke ọma ọrụ anyị dị iche iche ọ bụghị rue mgbe ị nwetara nkọwa zuru ezu banyere ọrụ ị kwenyere ime ị kpebiri na anyị bụ azịza ziri ezi maka gị.
Ugbu a ị họrọla anyị, ọ bụghị anyị kpatara nsogbu nsogbu azụmaahịa gị agbanweela ma ị nweghị obi ụtọ ugbu a na atụmatụ na ọrụ anyị kwenyere na anyị ga-edozi nsogbu ndị ahụ dịka ị kọwara ha n'oge ahụ. Anyị ghagha ụgha. Anyị ezighi ezi. Ọnọdụ gị na gburugburu gị gbanwere.
Ugbu a, anyị dịka otu kwesiri ịhakọta ma kwesiri ilekwasị anya
Kedụ ka esi eme osiso ga - eweta nsogbu nsogbu azụmaahịa ha
Dec 15, 2007 na 9:05 PM
Obi dị m ụtọ na ị bipụtara ụdị PG-13. haha. Ọ ga-amasị m iziga ụfọdụ ndị ahịa ụfọdụ ole na ole n'ime ndị ahịa a. Nke a ọ dị n'okpuru ikikere akwụkwọ ikike okike? Akwa isiokwu.
Dee 16, 2007 na 2: 04 AM
Gosh, ihe niile yiri ka ọ bụ eziokwu. Ihe dịka ị biri site na ekwentị ahụ na-agagharị… '-)
Dee 16, 2007 na 10: 14 AM
The ozi ịntanetị bụ n'ezie kwụsịrị na chaatị dị ka nke ọma! 🙂
Dee 16, 2007 na 6: 03 AM
Ee, enwere m ụfọdụ ndị ahịa na - enweghị obi ụtọ mgbe m mere okpukpu abụọ ahịa na ahịa ha… emesịa gwa gị na ha maara ụlọ ọrụ si India nke na - enye ndị ọbịa 1000000 kwa ụbọchị $ 25
Dee 17, 2007 na 8: 59 AM
Hapu ya ka o tinye Ade na nkea, nke edeputara ede nke oma na Pseudocoded!